Information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne - somaliska
Information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne
Skåne waxaa ka hirgalay nidaamyo cusub oo khuseeya dumarka uurka leh, taasoo ujeedadeeda tahay in laga hortago in shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka iyo bukaan-socodyada la qaadsiiyo cudurka loo yaqaanno [covid-19].
Lamaanahaaga looma oggola in uu goobjoog ka noqdo baaritaanada uurqaadida
Lamaanahaaga looma oggola in uu goobjoog ka noqdo baaritaanada uurqaadida. Sida tusaale baaritaanada ku salaysan farsamada [ultrasound]. Nidaamkaan wuxuu ka hirgalay xarumaha hooyooyinka iyo isbitaallada.
Haddii ay jirto xaalad aad gaar u ah, waxaa suuraggal noqon karto in shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka ay nidaamkaan ka weecdaan. Laakin waa in ay jirto xaalad aad gaar u ah.
Waxaa suuraggal ah in lamanahaaga u goobjoog ka noqdo ummulida
Waxaa suuraggal noqon karto in lamanahaaga u goobjoog ka noqdo ummulida, laakin waa in caafimaadkiisa u boqolkiiba boqol fiican yahay. Waa in usan la xannuunsanayn, sida tusaale qandho, qufac ama dhuun-xannuun. Haddii u xannunsan yahay looma oggola in u soo guda-galo isbitaalka.
Waa lagu oggol yahay in ummulida kaddib aad dhallankaaga dhabta saarato
Waa lagu oggol yahay in ummulida kaddib aad dhallankaaga dhabta saarato, waa haddii labadiinna aad caafimaad qabtaan. Xaaladaas waxaad ku sugnaan kartaan waaxda dhalmada. 48 saacadood ayaa waaxda ku sugnaan kartaan. Laakin waxaad aqalkiinna ku laaban kartaan lix saacadood kaddib, waa haddii aad doonaysaan oona aynan jirin wax dhibaato ah.
Lamaanahaaga looma oggola in uu waaxda dhallanka [BB-avdelningen] kugu wehliyo.
Cudurka loo yaqaanno [covid-19] miyaa ku dhacay? Xannuunka dartiisa ma u baahan tahay daryeel-caafimaadeed? Xaaladaas laguma oggola in ummulida kaddib adiga iyo dhallanka aad isku meel ku sugnaataan.
Ku saabsan qalniinka qorshaysan ama degdegga ah
Hab degdeg ah mise ma lagu qorsheeyay in uurjiifka qalniin lagaga soo saaro? Xaaladaas waa in lamaanahaaga u qol kale kugu sugo xilliga qalniinka. Xaaladaas waa in lamaanahaaga usan lahayn qandho, qufac ama dhuun-xannuun. Haddii u calaamadahaas leeyahay looma oggola in uu isbitaalka ku sugnaado.
Lamaanahaaga qalniinka kaddib wuu la kulmi karaa dhallanka. Qoyska oo idil muddo gaaban ayay wada joogi karaan.
Adiga iyo dhallanka waxaa markaas kaddib la idinku daryeelayaa waaxda dhallanka. Lamaanahaaga looma oggola in uu kugu wehliyo waaxda dhallanka.
Haddii aad ummuli doonto oona kugu dhacay ama laga shakisan yahay in uu kugu dhacay cudurka loo yaqaanno [covid-19]
Ma kugu dhacay cudurka loo yaqaanno [covid-19] ? ama ma dareemaysa qandho, qufac ama dhuun-xannuun, kuwaasoo noqon karo calaamadaha cudurka loo yaqaanno [covid-19] ? Xaaladaas waxaa ku ummuli doontaa qol go`doman oo ku yaallo isbitaalka. Waa qol aan ka duwanayn qolalka lagu ummulo. Waa qol ka goonibaxsan waaxda ummulida.
Ummulida kaddib qolkaas ayaa iska joogaysa. Haddii kale, waxaad cudurka loo yaqaanno [covid-19] qaadsiin kartaa bukaan-socodyada kale.
Haddii adiga iyo dhallankaaga aad sideeda kale u caafimaad qabtaan waad wada joogi kartaan. Xitaa haddii uu kugu dhacay cudurka loo yaqaanno [covid-19] ama aad dareemayso qandho, qufac ama dhuun-xannuun. Haddiise cudurka loo yaqaanno [covid-19] dartiisa aad u baahan tahay daryeel-caafimaadeed gaar ah, xaaladaas adiga iyo dhallankaaga ma wada joogi kartaan.
Haddii dhallanka u daryeel gaar ah goor dambe u baahan yahay, laguma oggola inaad dhabta saarato. Sida tusaale, haddii aad ummusho kahor wakhtigii lagu qabtay ama u qabo dhibaato kale. Xaaladaas waxaad dhallanka lagu daryeelayaa waaxda dhallanka lagu daryeelo [neonatalavdelning].
Dhammaan waaxyada ummulida ee Skåne, waa lagu qaabila dumarka uurka leh, oo uu ku dhacay ama laga shakisan yahay in uu ku dhacay cudurka loo yaqaanno [covid-19].